Khumbula eSoviet ifilimu elidala "Sizobe Phila Kuze ngoMsombuluko"? Emlonyeni omunye protagonists kwakuzwakala nkulumo kanje: "Injabulo - kungcono uma sewazi," owaba leitmotif amabhayisikobho mayelana nothando, ngegama elibaluleke kunawo profound ukuthi ngezinye izikhathi kangaka nzima ukubona, ayeke, ukuhambisa ehlombe bheka ngqo emehlweni ... Kodwa indaba yethu akusho ukuthi, nakuba leitmotif akukatjhuguluki: injabulo - kulapho uqonde. Sizokhuluma ngalokhu ngempela into entsha njengoba ulimi "okunosawoti". Ake sibheke yonke imininingwane. ulimi "Salty" - kuyini?
World of fantasies zezingane ngokungenamkhawulo egqamile futhi eyingqayizivele. Ezinye amaphupho zinyamalale njengoba masinyane njengoba we zikhula, abanye bahlale. Zikhula kanye nathi, kuthiwa Ushintshe, mudreyut, zipendwe ngemibala ezintsha futhi ngezinye izikhathi kakade yingxenye Okuyınqo, kunokuba emhlabeni engokomfanekiso. Kungani-ke ngakho hhayi ngenye - umbuzo ongeke uphenduleke. Zethu emhlabeni kwangaphakathi kukhonjelwe neminye imithetho. Ziyakwazi ezansi le ulwandlekazi. Asikwazi ngizibuke ngokusebenzisa ukushuba oluluhlaza crystal nasemanzini. Sithathe umoya kakhulu, ngena, benethemba lokuthola okungenani omunye wabo, kodwa ngenxa yalokho - sinemandla kuphela isikhashana uzithinta, ngoba ijulile kakhulu nomoya-mpilo omncane kakhulu ....
Enye yalezi "Usana" ezisunguliwe kuyinto non-akukho, ulimi magic, okuyinto akhulunywa "ukhetha" - wena nabangani bakho abaseduze, nangabo bonke abanye, ikakhulukazi abadala, yima eceleni futhi sizibuza ukuthi kwakwenzekani enkundleni. Bese emcabangweni yezingane, ngivula yonke iminyango - ungakhuluma bese beveza lutho - izimfihlo izimfihlo uyohlala phakade, kanye "magic" emhlabeni akekho umuntu zithithibele. Ngisho noma akuzona zonke, eziningi ingane okungenani kanye ecabangana ke. Ubufakazi inombolo enkulu "lobulungu" zokuxhumana nabantu iqembu "ulimi okunosawoti". Lokhu kuhlobana badalelwa kulabo ubazi noma ufuna ukufunda ukuze sikhulume 'usawoti ", noma njengoba ibizwa" isitini "ulimi.
"Salty" ulimi futhi babe nomqondo yezingane ukuthi ngelinye ilanga uyoba ngokoqobo. Ngakolunye uhlangothi, uma ngephutha endaweni ethile uzwa igama elithi "osodnosoklasassnisitsasa", uzobe kunzima ukuthola lokho noma ukuthi ungubani, futhi ngakolunye uhlangothi - konke kalula futhi umane NGAMAFUPHI uhlamvu u- "a" yengezwe ngemva unkamisa ngamunye futhi plus unkamisa efanayo. Manje, emuva uhambe kancane bese uphinde ufunde izwi engaqondakali. Kwenzekeni? Kunjalo, kungcono "ayefunda naye esikoleni." Kunzima? Akukhona neze kuphela - kuyinto engavamile. Ngokuvamile kakhulu kwisifundo sanoma imuphi ulimi iqala izinhlamvu nemisindo. Kulokhu, isahluko esinesihloko esithi "Ulimi okunosawoti, zolimi" engashiywa. Lapha into esemqoka - ukulandela yasekuqaleni iphethini "unkamisa + C + unkamisa". Futhi njengoba wazi esikoleni, 10 kuphela ngesiRashiya onkamisa. Ngakho, kuvela ukuthi inhlanganisela yezinhlamvu AIA, ECE, Oso, ICI, CCA, be-CCD, YSY, u-Ese, Yuexiu, Yasya udla emva izincwadi ezifanele - "isigrasa" (game), "dos" (indlu), "Yasha" ( mina). Labo umbono wafika ukunambitha, abafuna ukubuyela ebuntwaneni, noma nje uzijabulise, une ukuze balukhulume kahle ulimi "okunosawoti". Mfundise isikhathi eside akudingekile, futhi ziyinto enkulu olunikezile. Njengoba Bathi, yiluphi ulimi kuthatha umkhuba. Ngakho funda, zama, futhi mhlawumbe ngelinye ilanga ukudala ngolimi lwabo esiyingqayizivele "okunosawoti", noma "isitini" noma "plastic", noma ... Ngesikhathi elapho, futhi kunabantu kuqokwa, nginithandile, futhi umusa usuvele baqonde ngolimi lwakho esiyingqayizivele, njengoba uqonde kuwo, futhi akekho ovela ngaphandle Asikuzwa ngoba umhlaba wakho, izwe okungokukaNkulunkulu kuphela wena nomndeni wakho nabangane ....
Smyslovye izinhlayiya. izici zabo
Verb njengengxenye yokukhuluma
Kuyini umbungu kwezilwane kanye wezitshalo
Artdeco - Izimonyo izinga okuqinile ngenani lentengo elikahle
"Isiqhingi sasePharadesi" (Hurghada) kanye nezimfihlo zayo